Ny fatiantoka maharatsy na ratsy izay heveriko fa manana SolusOS | Avy amin'ny Linux
Efa niresaka betsaka isika amin'ity distro vaovao ity, izay efa miditra amin'ny solosainan'ny maro ... Fa maninona i SolusOS no nahomby tamin'ny fotoana fohy? Efa naneho hevitra momba azy io izahay, ary raha ny marina dia misy teboka miabo vitsivitsy io, na izany aza; mbola tsy resy lahatra io geek manetry tena io.
Fa maninona aho no tsy mbola mieritreritra ny hampiasa SolusOS? ... Fa maninona na dia ny olona (na saika ny olona rehetra) dia nahazo valiny tsara tamin'ity distro ity, dia mbola misalasala ihany aho?
SolusOS araky ny tokony ho fantatry ny rehetra amin'izao dia distro miorina io debian-squeeze (stable), saingy izao no hisy, satria amin'ny manaraka 2 version dia hiorina amin'ny tranon'omby ho avy Debian: wheezy.
Notanan'i ikey (mpamorona ny LMDE) izay tsy miasa intsony amin'ny famoronana voalohany (Averiko ihany, LMDE), ankehitriny mamolavola / mitazona SolusOS, izay raha ny fahitako azy dia tonga hameno ny banga navelan'ny LMDE (na havia) eo amin'ny fiarahamonina, ary tonga tokoa ny famenoana azy satria saika mitovy.
Fa hey, heveriko fa tsy ilaina ny manazava ny atao hoe SolusOS, lavitra azy io 😉
Izay nolazaiko tany am-piandohana, na dia misy lafiny tsara aza io dia tsy hitako izay antony hampiasana azy.
Misy afaka milaza amiko ve izay omen'i SolusOS ahy, fa tsy azoko mivantana avy amin'i Debian?
Tsy te-hiteny amin'ny anti-SolusOS aho, tsy dia matoky an'ity tetikasa ity aho hatreto. Azavao!, Tsy milaza aho hoe tsy hahomby lavitra azy io, fa aleoko mametraka apetraka tsara amin'ny Debian + Environment + amin'ny alàlan'ny fampiasana Debian Squeeze (stable ankehitriny), amin'ny fampiasana Wheezy (fitiliana), Sid, na mandritra ny fotoana rehetra. apt-pinning, maninona no mampiasa SolusOS.
I Debian dia tetikasa iray nosedraina ary neken'ny fotoana, manana ny mahatsara sy maharatsy azy tahaka ny olon-drehetra izy, fa ho tombontsoan'ny rehetra dia distro (sy tetikasa) efa milamina sy voasedra izy io. Noho izany, ny fampiasana mivantana an'io distro io, ny fonosany, ny politikany fampiharana / fonosana, manome antoka valiny mahafa-po.
Raha manao SolusOS, dia mampiasa ny repositories an'i Debian, noho izany dia manana fahamendrehana azo avy amin'ny ray aman-dreniny (Debian) izy, na izany aza; tsy manaraka ny politikan'ny fizahana fonosana an'i Debian izy fa manana ny azy manokana. Ohatra, ao amin'ny Debian Wheezy (andrana) (na tsaratsara kokoa na ratsy kokoa, noho ny antony X na Y) Xfce4.10 mbola TSY misy, heveriko fa mbola misy bibikely na zavatra toa izany, raha ampidirin'i SolusOS tsy misy olana.
Betsaka ny ohatra, saingy tsy ny tanjon'ity lahatsoratra ity no tanjony.
Averiko ihany fa tsy mpanohitra SolusOS aho, fa amin'izao fotoana izao dia aleoko mampiasa (matoky bebe kokoa) Debian miaraka amin'ireo tahiry ofisialy, ekipan'ny mpihazona azy be, ary ny fialonana sy ny fiahiany tsy hanana bibikely (na dia elaela vao misy ny kinova farany an'ny rindrambaiko), hametrahana distro izay mampiasa repositories an'i Debian eny, saingy manana ny politikany fampidirana fonosana manokana, ary na mampiasa repositories an'i Debian na tsia ... dia (amin'ny farany) tantanan'ny olona iray.
Antony iray tena lehibe iray hafa koa satria mpampiasa tiako aho KDE, ka tsy ho ahy manokana i SolusOS :)
Rehefa milamina ny kinova 2 an'ny SolusOS, dia ampidiniko izy ary angamba apetraka amin'ny PC an'ny birao, na eo aza izany dia hanohy hanjaka amin'ny solosainako i Debian toy ny volana vitsivitsy.
Manantena aho fa tsy nandratra ny fihetseham-pon'iza na iza, ary na dia toa tsy azo antoka amin'ny sasany aza izany dia niezaka ny ho tonga tanjona araka izay tratra aho satria tsy manana lolompo amin'ity distro lavitra ity (raha ny marina dia heveriko fa hilahatra laharana faha-2 na No.3 haingana izany), Mila toky tanteraka fotsiny aho fa handeha OK ny zava-drehetra, filaminana 120%, ary ara-teknika tsy haiko; fa tsy omen'ny SolusOS ahy ara-tsaina izany.
Pd: Eny elav, SolusOS dia kendrena ho an'ny daholobe izay tsy te-handrindra Debian be dia be mba hahavonona azy, fa kosa te-hametraka distro ary ho vonona ny zava-drehetra, saingy tsy dia fantatro loatra 🙂
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Ny fatiantoka ratsy na ratsy izay raha ny hevitro dia manana SolusOS
Raha fantatrao fa ny SolusOs dia ho an'ny mpampiasa farany, tsy hitako ny teboka amin'ity lahatsoratra ity, dia tsara kokoa raha manoro hevitra ny debian ho an'ireo mpampiasa toa anao ianao ary manisy fiovana satria ny solusOs dia kokoa ho an'ireo vao manomboka, dia toy ny linuxmint ho an'ny ny mpampiasa farany ary efa vonona ny zava-drehetra, Ny lahatsoratra iray momba ny antony mahatonga ny SolusO ho an'ny mpampiasa farany dia ho tsara kokoa, satria raha tsy fantatrao ny debian, distro toa solus dia tsy hiantso ny sainao mihitsy. Ity dia tena hevitry ny maro noho ny zavatra hafa rehetra.
Ny dikan'ity lahatsoratra ity dia tsy iza fa ny mamela ny fomba fijeriko momba azy.
Azoko tsara fa manana tombony maro ny SolusOS, tsy laviko izany, fa raha ny fahitako azy, raha ny fahitako azy (araka ny nolazaiko imbetsaka etsy ambony) ... Tsy dia manome ahy be loatra aho, raha tsorina: «io tsy mendrika ny 'risika' »
Ary mazava ho azy fa hevitra izany, aiza amin'ny lahatsoratra no anaovako mody fa hevitra teknika fotsiny? 😀
Tongasoa eto amin'ilay tranonkala
Ny tsy azoko dia ny filazanao hoe: "Tonga hameno ny banga navelan'ny LMDE (na havia) eo amin'ny fiarahamonina io, ary tonga hameno azy tsara satria saika mitovy io." ary efa nolazainao tamin'ny lahatsoratra iray hafa fa ny LMDE no tsara indrindra, ankehitriny dia hita fa ny SolusO na dia mitovy amin'ny LMDE aza dia tsy mameno anao….?
Raha ny fahitako azy dia efa mihena ny LMDE, na noho ny tsy fahalianan'ny Clem na ny anton-javatra hafa. Ka mahatsapa ho ratsy ny mpampiasa an'ity distro ity, ary eo SolusOS no miditra amin'ny lalao ... manome azy ireo fotoana hananana vokatra 'style' LMDE.
Debian dia mety ho distro vaovao; angamba tsy ny fametrahana sy ny fanaingoana voalohany, fa avy eo tsy hitako hoe maninona no tsy avela ho an'ny zazavao.
amina (@ amina0) dia hoy izy:
Ny zavatra hitako dia ny SolusOS dia mikendry bebe kokoa an'ireo mpampiasa rehetra izay mbola tsy mahita birao miasa toa an'i Gnome 2, izay omen'ny desknops toa ny Gnome Shell na Unity antsika. Mazava ho azy fa holazain'izy ireo toy ny LXDE sy Xfce izay tena itovizany fa misy ifandraisany amin'ny tsiron'ny olona tsirairay ary amin'izay tsy misy afaka miditra. Ary koa dia nanavao fonosana toy ny fanonona ohatra Firefox.
Namaky fanehoan-kevitra aho hoe "maninona no mampiasa SolusOS amin'ny fisehoany fotsiny, ny tena manisa dia ireo fonosana ary ireo fonosana dia avy amin'i Debian ... avy eo mifikitra amin'i Debian", eny, mitombina izany. Fa ny zavatra mahafinaritra dia ny manandrana azy ary miaina ny fahatsoran'ny fampiasana azy, raha tianao tsara, nefa koa. Raha averiko dia ny tsiron'ny tsirairay. Ary tsy avelany handainga aho, raha voalaza tao amin'ny tambajotra bilaogy izany satria zavatra tsara no mitondra, sa tsy izany?
Ny zavatra farany tiako ampiana dia raha tsy zava-dehibe ny fisehoan'ny distro dia tsy hisy izany ary tsy ho eo amin'ny toerana voalohany an'ny Distrowatch Linux Mint, fantatsika rehetra fa ny fonosany dia avy any Ubuntu avokoa.
Miarahaba antsika maraina ary miarahaba antsika rehetra =)
Mamaly ny hug0tux (@ hug0tux)
Izay ilay nolazaiko andro lasa izay niaraka tamin'ny linuxeros hafa Maninona raha mampiasa Debian mivantana? - Miarahaba anao POST tsara
Antony marim-pototra izy ireo.
Andao. Ireo izay mivadika ho SolusOS dia ankamaroan'ny olona manana nostalgia amin'ny GNOME 2, saingy i Debian kosa tsy hanao patch GNOME 3
Ity koa dia teboka iray hafa tokony ho raisina, fa raha ny fahitako azy dia tsara kokoa ny mampiasa matte toy izay gnome 2 nasiana pataloha XNUMX, fa raha fintinina dia misy tsiro miloko hoy izy ireo eo ary miala tsiny amin'ny lesoka tamin'ny tsipelina tamin'ny hevitra XD voalohany.
Amboary: gnome 3 nopetahana
pardinho10 dia hoy izy:
Amboary bebe kokoa: gnome 3 azo ampiasaina 🙂
Mamaly an'i pardinho10
Ny tsy azoko dia ny tsy fankanesan'ny olona tsy faly amin'ny GNOME 3 mankany XFCE, izay tena mitovy ...
Ny marina dia mahita olona maro aho manandrana mameno ny elanelana navelan'ny GNOME 2 amin'ny zavatra nohariana vaovao ary tsy misy olona, ​​na olona vitsy dia vitsy, mihaino ny XFCE, izay tontolo iainana tsara, ary afaka avela ilay mitovy amin'ny gnome 2.
Ho ahy, anio, na ny vady na ny Cinnamonn dia tena safidy hafa amin'ny birao mahazatra toa an'i KDE, XFCE, LXDE, sns ...
Mizara izay lazainao aho. Raha mitady ny fahatsoran'ny fomba Gnome 2 ianao dia ampiasao ny Xfce na LXDE, izay maivana koa (indrindra ny LXDE).
hevitra tena tsara, be pitsiny sy misy fanjohian-kevitra, ny fotoana no hiteny ny halaviran'ny distro vaovao
Misaotra, tsara ny mahafantatra fa takatra ny anton'ilay lahatsoratra.
John Sources dia hoy izy:
Raha ny tena izy dia heveriko fa ny fampiroboroboana ny fahalalanao fotsiny no tadiavinao, satria toy ny itiavanao azy amin'ny toetrany madio dia misy olon-kafa manana safidy hafa ary na dia manandrana aza ianao tsy hiteny ratsy momba ny solus, subliminally ataonao izany, ny tranon'omby na ny fitsapana dia mitovy ihany, na dia voaporofo aza ny tranon'omby, dia mbola mila havaozina tsindraindray noho ny olana ara-piarovana na amin'ny fanavaozana ny rafitra ihany, mampiasa ny fitsapana aho raha ny marina, sparkylinux nandritra ny roa taona izao, izaho tsy mbola nanana olana momba ny fatiantoka data na zavatra hafa, izay hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny kahie.
Valiny tamin'i Juan Fuentes
SolusOS dia nahomby be dia be ary haingana noho ny patch nataony ho an'ny GNOME 3
Marina ny anao ary ny marina amin'ny hevitro manetri-tena dia tsara kokoa ny mampiasa MATE, izany zavatra izany dia mampatsiahy ahy ireo fotoana güindos nataoko rehefa nijirika lalao aho.
Mbola mino aho fa ny fahombiazany ankehitriny dia noho ny tsy fahombiazan'ny LMDE amin'ny heviny sy ny fahalalahany.
Ny marina LMDE raha tsy nisy ny fahamendrehan'i Debian; Ny LMDE no mety ho distro ratsy indrindra noforonina, satria izy ireo dia nanao kinova famotsorana an-tsokosoko miaraka amin'ny repos repos, satria distro antsasaky ny vita io ary tsy nahazo ny ezaka sahaza azy akory, mety ho distro be izany fa nifarana Amin'ny maha-iray amin'ireo ratsy indrindra ahy, dia vao mainka sahiko ny milaza ny maha masina azy satria azo antoka fa handoro ahy eo amin'ny tsatokazo ny Taliban sasany aorian'ity: Ubuntu dia tsara lavitra noho ny LMDE, ary koa ny LMDE dia toa nanandrana ireo repos, saingy novaina toy ny hoe milamina ary raha tsy noho ny Debian mifototra aminy dia tsy azo nampiasaina akory io distro io, satria ny linuxmint dia nanao azy ho lovia latabatra faharoa ary ny fotoana ilaina dia tsy natokana ho azy.
Ny Ubuntu dia ho tsara kokoa noho ny LMDE sy ny disto maro hafa raha mandeha izany, ha ha. Ny olana dia tsy mandeha ny Ubuntu: misy lesoka isan-tsokajiny, tsy maintsy miandry ny mpampiasa azy, noho ny tsy fandriam-pahaleman'ny Ubuntu, hatramin'ny roa volana vao manomboka mampiasa famoahana vaovao, sns, sns, sns ...
Tsy isalasalana fa tsy maintsy nampiasa ubuntu hafa izaho sy ianao.
Mikasika izay lazain'i Adoniz dia heveriko fa izany no izy, lasa sahona ny LMDE ary afaka mandray ampahany betsaka amin'ireo mpampiasa azy i Solus
Oberost, tsy dia manokana ny fanontaniana, zavatra toy ny "Ubuntu ratsy ho anao, nandeha tsara ho ahy izany." Ny dinika Ubuntu sy Linux amin'ny ankapobeny dia feno fitarainana avy amin'ireo mpampiasa Ubuntu momba ny hadisoana be dia be, mbola tsy fantatrao ve?
Fa ireo izay nanana olana ihany no mandefa ao amin'ny forum, sa tsy izany? Tsy miaro an'i Ubuntu aho, raha ny marina dia ekeko fa tsy marin-toerana be izy io manomboka amin'ny kinova 9.x ka hatreto 😀
Raha ny amiko, tamin'ny 10.04, puff, loza .. Na dia manana solosaina miasa miaraka amin'i Precise aza aho izao ary milamina tsara.
ho ahy manokana, miaraka amin'ny Ubuntu no olana tokana nananako dia ny sary, satria ny compiz dia tsy nifandray tsara tamin'ny intel. ny ambiny, tsara, ao anatin'izany ny Unity. raha tsy izany, raha mihevitra ny Ubuntu ho tsara kokoa noho ny Mint aho, hatreto. ary lazaiko izany na dia any Chakra aza aho, ary tsy mihetsika aho raha tsy manjavona.
I Luis, lozika no malaza indrindra, na iray amin'ireo be mpitia indrindra, no resahina indrindra ary tsy dia misy dikany izany.
Ny zavatra niainako mazava ho azy dia ny zavatra niainako fotsiny fa satria mametraka solosaina maro ho an'ny asa aho dia mieritreritra fa tsy ratsy izany. Ary apetrako foana ny ubuntu satria amiko dia io no fikojakojana kely indrindra ho an'ny mpampiasa.
Angamba ny zavatra niainako dia somary tsara kokoa noho ny salan'isa satria mpandala ny nentin-drazana aho ary mametraka LTS foana (mafy, matanjaka ary marina ankehitriny), ary hatramin'ny 12.04 dia mametraka XFCE (Xubuntu) aho satria tsy matoky ny fahombiazan'ny firaisan-kina ho an'ireo ekipa miasa.
@Luis, raha loza i Ubuntu dia tsy azoko an-tsaina ny antony mahatonga ny fizarana be dia be avy amin'ny Ubuntu. Sadomasochism? Sa ny Firaisankina no mahatonga ny rafitra tsy milamina? Mino aho fa ny dikan'ny sasany dia manome anarana ratsy amin'ny fizarana sasany. Raha vantany vao mivoaka ny kinova vaovao dia miova izy rehetra nefa tsy miandry fotoana mety ary avy eo mitaraina momba ny tsy fandriam-pahalemana (ao amin'ny Fedora sy Ubuntu dia miseho be)
Misy zavatra roa tsy azoko mihitsy, ny distro tsy mitovy amin'ny fatra sy ny fironana angano ao amin'ny GNU / Linux ...
Tsy milamina ny Ubuntu ... Efa nanao fitsapana tamin'ny milina maro aho ary azoko lazaina amin'ny base sy ny isa fa milamina toa an'i Debian ny Ubuntu ary amin'ny tranga sasany dia mahomby kokoa ny asany, ny tsy milamina amin'ny Ubuntu dia antsoina hoe Unity, satria miaraka amin'i Shell it dia vatolampy.
Efa lany andro i Debian ... Ny fitsapana an'i Debian dia "hatreto" (fandaharan'asa miasa) vaovao kokoa noho ny distro malaza indrindra sy manara-penitra, mihoatra ny Fedora 17 sy Ubuntu 12.04 ary openSuse sns, it manana programa bebe kokoa noho ny disto hafa. MakeHuman, Synfig.
Mihodinkodina koa i Debian.
Ubuntu dia manome anao fiarovana izay tsy ananan'i Debian, ny fitokisan'ny fahatokisana, fantatrao izay anananao sy izay azonao ianteherana, tonga tamiko ny fametrahana milina maro miaraka amin'i Debian androany misy programa vitsivitsy ary rahampitso toa an'i Cinelerra, Avidemux .
Tsy tiako ny SoluOS, mainka fa rehefa avy nampiasa Debian, izay azo antoka fa ny solontenan'ny GNU / linux tsara indrindra. Raha mampiasa Ubuntu aho izao dia noho ny fanamorana ny fikirakirany ary satria fomba tsotra fampidirana mpampiasa vaovao izay tsy liana amin'ny fametrahana tsipika kaody ao anaty terminal io.
PS: Nahazo hafatra karazana matrix avy amin'ny desdelinux nandritra ny fotoana fohy aho, tsy nahazo fampandrenesana hafa intsony, hatramin'ny omaly rehefa nahazo hafatra hafa karazana matrix aho, saingy tsy mahazo fampandrenesana ihany koa 🙁
Tsy maintsy taorian'ny nanetsika ny JetPack ho an'ny fanehoan-kevitra, sa tsy izany?
Ny JetPack? Tena tsy haiko 😀 nisoratra anarana taminao aza aho fa ny lisitry ny hafatra ihany no hitako.
Tsy azoko ny lazainao, raha afaka mampakatra pikantsary amin'ny tamba-jotra ianao mba hahitana hoe inona ny olana, ary hamaha izany 🙂
KZKG ^ Gaara dia efa namafa ilay hafatra ary tsy azoko, amin'ny ankapobeny dia hafatra izay ahitanao ny kaody html rehetra an'ny pejy, fa ireo lahatsoratra vaovao raha raisiko ara-dalàna izy ireo ... rehefa tonga ny iray hafa dia hasehoko azy io ho anao, misaotra fa efa miandry.
Ok asehonao ahy 😉
Ary tsy misy namana, miandry foana izahay ... na dia toa tsy izany aza, eny isika we
Eny ... nandao ny LMDE aho noho ilay antony resahina eto, efa nilaza aho fa raha tsy mametraka an'i Xfce i Solus na mitsidika ny pejiny dia omeko izany. Satria tsy te hiandry an'i Mint Maya hamoaka ilay kinova miorina amin'ny Xfce aho dia niverina tany amin'ny distro faharoako, UbuntuStudio izay nandefa ny Gnome tany amin'ny churro ary nampiasa ny totozy. Raha nanome ahy lesoka izy, dia tsy laviko izany, fa ny rehetra, iray ihany no lesoka tamin'ny rafitra, ny hafa kosa ahy nametraka sy namono zavatra tamina fomba hadalana. Ivelan'io dia miasa toa ny pc namboariko izy io ho an'ny Ubuntu, Mint na churro hafa azo avy amin'i Debian. Raha tsy toa izany ny hakamoako dia nampiasa an'i Debian aho saingy sarotra amiko ny mampifangaro ny zava-drehetra, rehefa misy disko izay manome ahy izay ilaiko efa napetraka mialoha ary zavatra roa ihany no apetrako ary esory ny telo araka ny ataon'izy ireo. tsy mifanentana amiko (raha fantatro fa tsy misy fiantraikany amin'ny zavatra izany, raha tsy ...)
Eny, araka ny lazaintsika eto amin'ny taniko: "Samy miresaka momba ny foara ny tsirairay" -3-
Misy roa isika izao 🙂… andao lazaina fa SolusOS no tokony ho LMDE
Fa raha ny LMDE no tsara indrindra dia ampiasaiko sy olako 0 izany. Fa inona koa no tadiavinao, tena tsy azoko ianao. Inona no olana??
Ny hevitra sy fahatokisana izay ananan'ny tsirairay dia manana distro X na Y dia hajaina.
Misy antony manery anao te-hampiasa SolusOS fa tsy Debian (milamina na manandramana), ary ity manaraka ity: fonosana nohavaozina bebe kokoa + Fiorenana mafy.
Fa ... maninona no maharitra ela i Debian amin'ny fampidinana ireo fonosana? Araka ny voalazanao, ny politika dia ny fanandramana araka izay tratra ny zava-drehetra ary tsy misy bibikely ... ny fotoana tsy raharahian'izy ireo dia ny fahasamihafana miovaova isaky ny sehatra mankany amin'ny sehatra. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ny olana iray misy fiatraikany amin'ny KfreeBSD dia tsy hisy fiatraikany amin'ny AMD64, fa angamba ny fanitsiana azy io dia hampiodina ny olona hppa. Ireo lesoka ireo dia mahazatra amin'ny programa voasoratra ao amin'ny C na toy izany (Ny zavatra voasoratra amin'ny python dia sahirana amin'izany).
Debian no rafitra fiasa iraisan'ny rehetra, satria miasa tsara sy mitovy araka izay azo atao izy, amin'ny sehatr'asa-maritrano rehetra anohanany azy.
Saingy ... firy ny mari-trano tohanan'ny SolusOS? Eny, mitovy amin'ny Arch: x86 sy AMD64. Ny rindrambaiko rehetra izay navotsotra ho "marin-toerana" ataon'ireo mpamolavola azy dia efa mihoatra ny fitsapana ireo aritrano roa ireo.
Ohatra, LibreOffice: tamin'io andro io ihany dia navoaka tamin'ny besinimaro izy io, tao amin'ny SolusOS no misy azy fa tsy tany Debian, satria nalefa tany amin'ny Experimental izy. Ny LibreOffice dia tsy niasa tsara tamin'ny maritrano rehetra, taorian'ny fanavaozana maro dia nahavita nidina ny fanandramana, fa tao SolusOS dia niasa tsara hatramin'ny voalohany.
Ho ahy, ny SolusOS dia tsy miteraka fihenjanana ara-tsaina amin'ny tsy fahatokisana fa hisy zavatra hijanona tsy hiasa intsony, ary izany dia satria na dia toa malemy kokoa noho ny an'i Debian aza ny politikan'ny fonosana, ho an'ireo maritrano roa izay tohanan'izy ireo dia mihoatra ny ampy.
Amin'izany dia mieritreritra aho fa miombon-kevitra aminao aho fa mbola mieritreritra aho fa ny SolusO dia safidy ho an'ireo vao manomboka tsy dia vaovao amin'ny linux (saika toa ahy) XD.
Eny mazava ho azy, tsy ho an'ny vao manomboka ... fa ho an'izay te hanana rafitra vonona hametraka azy fotsiny.
ho an'ireo mari-trano roa tohanan'izy ireo dia mihoatra noho ny ampy
Fomba fijery mahaliana, araka ny nolazaiko ... mbola tsy nahita an'izany aho 😀
ErunamoJAZZ Mitovy hevitra aminao aho.
Toy izany koa no mitranga ao amin'ny Fedora lazain'ny olona fa rafitra TSY MAHATONDRANA "heverina" ahahaha xD .. fa toy ny nolazainao ihany, ny fonosana rehefa mivoaka izy ireo dia natao STABLE amin'ny x86 sy AMD64 ...
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fonosana vao navotsotra rehetra dia TSY MAHATSANGANA, fa STABLE tanteraka ho an'ireo maritrano. (x64 sy AMD64)
Ity Debian ity dia maharitra ela kokoa amin'ny fisintomana kinova vaovao amin'ny fonosana iray dia noho io, satria miasa mafy izy ireo ka tsy miorina amin'ny x86 sy AMD64 fotsiny fa amin'ny TOOOOOOOOOOOODASSSS ireo maritrano hafa izay tohanan'ny Debian.
Ka TSY MISY afaka milaza izay hotafiana Fedora na fampiasana debian-sid dia ny fampiasana distro UNSTABLE (¬_¬) satria diso tanteraka izy ireo.
Jamin-samuel, azoko atao aminao ny milaza aminao amin'ny feo mitsikera ny zavatra niainako manokana fa ny Fedora farafaharatsiny ilay 16 izay notsapaiko dia tsy marin-toerana, milamina ihany ny rafitra ary miasa tsara ny Shell, saingy tsy mandeha ny programa. na ireo izay entin'izy ireo amin'ny toerana misy anao aza. Notsapaiko tamin'ny Athlon x4, AcerOne ary Core i7 izany.
Mitovy hevitra aminao aho. Manana 1.1 napetraka ho rafitra lehibe amin'ny solosaina finday sy amin'ny PC aho (tsy fantatro hoe haharitra hafiriana no haharetany, miova be matetika aho). Ny tena manintona ahy indrindra momba an'i Solus dia heveriko fa ireo fonosana nohavaozina. Mazava ho azy, nanao script aho roa izay nanova zavatra marobe izay tsy naharesy lahatra ahy ary tena tiako ho azy manokana izany
Tsy mahita lafy ratsy na lafy ratsy amin'ny SolusOS aho raha ampitahaina amin'ny motherboard Debian. Afaka nanome lisitra tsara ho an'ny SolusOS aho fa avy amin'ny Galaxy S2 aho ary fitsapana ny manoratra zavatra lava avy amin'ny Smartphone
tsy misy? O_O ...
tsy manam-paharoa: tsy misy kisary manokana ao amin'ny foibe rindrambaiko XD
Nozaraiko ny hevitr'i @ErunamoJAZZ., Ny votoatin'ny debian dia ny ho rafitra miasa manerantany, ary noho izany dia tsy maintsy miantoka ny fiorenan'ny fonosana amin'ny maritrano rehetra izy io.
Avelao aho hanazava izany indrindra ho an'ireo mpampiasa fizarana hafa izay mieritreritra fa misintona fonosana isaky ny maniry ny mpamorona Debian.
Raha ny momba ilay lahatsoratra dia tsy manohitra ny fisian'ny SolusOS aho, fa indraindray hitako fa tsy dia tsara loatra ny fanaparitahana be loatra ao anatin'ny GNU-Linux. Manontany tena aho hoe maninona no namela an'i LMDE ity mpamorona ity hiatrika tetikasa saika mitovy, avy amin'ny fitiavan-tena ve? -Mieritreritra aho fa mieritreritra aho fa maro ny mpamorona tokony hametraka ny tsy fitoviana sy ny mpifindra monina mba hiasa amin'ny tanjona iraisana.
Na dia marina aza fa tsara ny karazany, heveriko fa tsy be loatra ny sombintsombiny ary raha ny fahitako azy dia io no tena antony mahatonga ny fijanonan'ny GNU Linux amin'ny birao birao.
Andao hidina amin'ny ampahany: tsy hilaza zavatra mifanohitra amin'ity lahatsoratra ity aho satria araka ny filazanao azy dia ny hevitrao momba an'io no tokony hajaina. Saingy, andao hodinihintsika aloha ny fiovana vitsivitsy:
1-. Araka ny nolazainao fa mpampiasa mahatoky ny KDE.
roa-. SolusOS raha manome zavatra izay Debian tsia ary ampiasain'ny mpampiasa sasany: Firefox, Thunderbird, Opera na dia misy aza izy io iceweasel e icedove, ny sasany mbola aleony ilay taloha. Ampiako izany, ao amin'ny SolusOS azo atao ny manana ny kinova farany azo antoka talohan'izay Debian. Ary hamita ity teboka ity, satria ny patch rehetra izay nampiana ikey al Tontolo iainana gnome, mitady ny fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa, dia zavatra izay ao anaty fonosana voalohany tafiditra ao amin'ireo tahiry, dia tsy ho hitanao mihitsy.
3-. Ny APT-Pinning dia tsy mamaha na inona na inona voalaza tao amin'ny teboka 2.
amin'izao fotoana izao dia aleoko mampiasa (Matoky bebe kokoa aho) Debian miaraka amin'ireo trano fitehirizana ofisialy, ekipany mpikojakoja be, ary ny fialonana sy ny fiahiany tsy hanana bibikely
Fa izany ve SolusOS mampiasa ireo repository ireo ihany izy, manampy ny azy ho an'ny fampiharana sasany fotsiny.
5.- Na dia manandrana azy aza ianao, na dia tianao aza izany dia miahiahy aho fa hanao izany ianao KDE ankoatra ampiasaina GNOME, Ka aza ny mpiara-miasa no mandany ny fotoananao amin'izany, aleo misintona distro ianao mpomba ny KDE ary azo antoka fa any raha afaka mamoaka hevitra kendrena ianao 😀
6.-SolusOS ianao Xfce 4.10? Tsy fantatro ... Eny, teboka iray hafa manohana ahy amin'ity distro ity.
Mba hitaterana fotsiny fa tsy manana XFCE 4.10 ny SolusOS. Ny XFCE ao amin'ny SolusOS 2 Alpha 5 dia ireo repo Debian Wheezy, izany hoe, 4.8 😉
Izay no antony nilazako azy .. 😀
Eo indrindra no olana.
Tsy milaza aho fa ny fanamboarana nomen'i Ikey dia tsy zava-dehibe mihitsy ... ny mifanohitra amin'izay indrindra, fa ho ahy manokana, ho ahy manokana, tsy mitondra tombony ho ahy izany. Toy izany koa ny asa efa nataony tamin'ny applet sy ny hafa, hazavako… asa tena TENA ITY, tsy ratsy mihitsy ny vokatra, izany fotsiny no tsy mahasoa ahy toy izany, satria tsy mpampiasa Gnome aho.
Momba ny Xfce 4.10… tsy ianao ve no nilaza an'io teto? - » https://blog.desdelinux.net/solusos-una-distribucion-mas-basada-en-debian-squeeze/
Fa momba izay ihany:
ary azo antoka fa any raha afaka mamoaka hevitra kendrena ianao
Ny tsy fizaranao ny hevitro dia tsy midika hoe tsy tanjona izany. Eny, tanjona io, nosoratana avy tamin'ny fankasitrahako, ny zavatra ilaiko, ny tsiriko, fa tsy nisy fanatisme na toha-poana. Manana famaritana hafa momba ny objectivity ve ianao?
Teo no nilazako fa mety amin'ny ho avy ampidirina ao amin'ny XFCE 4.10 fa mbola tsy tonga io ho avy 😉
Mazava ho azy, ry mpiara-miasa, izany no hevitra: ianao, izay mpampiasa KDE, dia tsy mahazo tombony velively, noho izany ny lahatsoratranao, araka ny efa nolazaiko teo aloha, dia manaja aho raha ny hevitro, saingy tsy dia mety loatra amin'ny mpampiasa izany. toa anao. Araka ny efa nolazaiko teo aloha, ny fampitahana / famerenana / fanakianana / tolo-kevitra amin'ny disto hafa dia ho tsara kokoa ho anao mpomba ny KDE.
Very ny fitiavanao azy amin'ny zava-misy tsotra fa tsy afaka miresaka momba akondro ianao raha voatavo no haninao. Tsy hoe mba hahatsapa ianao hoe voatonona, fa amin'ny tenako dia tsy afaka mamoaka criteriona tena kendrena aho KDE (Eny, tsy ampiasaiko na fantatro 100% izany), tsy azonao alefa amin'ny SolusOS rehefa mbola tsy nampiasainao akory tamin'ny LiveCD. Fa averiko ihany, ny hevitrao dia miorina amin'ny zavatra novakianao, hitanao, henonao, hajaiko.
Tsy nilaza aho, Distrowatch no nilaza an'io 😀
Debian pro-KDE ve? … Arch pro-KDE? … Andao hojerentsika, lazao amiko ny distro mpomba an'i KDE tokana izay nampiasako nandritra ny 3 volana farafaharatsiny.
Manelingelina anao ve izany? … Aza mizara ny fiderana anao noho io distro io? … TPT!
Ny tanjoko dia tsy tanjona 100% marina satria tsy afaka ho tanjona 100% aho. Navelako ny hevitro (araka izay tratra araka izay tratra, ary tsara fototra araka izay tratrako), raha misy lesoka amin'ny fototra iorenako dia feno fankasitrahana aho noho ny fanoroana azy, fa mandra-pahatongan'izay, izany hoe, manatona ireo tohan-kevitra na hevitra izay hiatrehako azy, tsy misy intsony.
Diso fa eo amin'ny fiainana ianao, mpiara-miombon'antoka, diso. Ity lahatsoratra ity dia tsy manelingelina ahy mihitsy, ny mifanohitra amin'izay, faly aho mahita fa maninona ianao no tsy afaka manohina ny zavatra malaza ary tsy mampiasa "satria mampiasa ny hafa", eny, eny fa na dia raha milaza ianao fa tsia Anti-SolusOS, manahirana anao ny miresaka momba azy ny tsirairay.
Ary tena tsy azoko hoe inona ny fanaintainana, raha amin'ny farany dia distro izay tsy natao ho an'ireo mpampiasa toa anao, ary mainka fa ny iray izay mampiasa ny Desktop ampiasainao.
... raha manana lesoka amin'ny fototra iorenako dia feno fankasitrahana aho noho ny fanolorana azy ireo, fa mandra-pahatongan'izay, izany hoe, manatona ireo tohan-kevitra na teboka iatrehako dia tsy ...
Angamba raha avelanao ho mazava kokoa amiko ny dikan'io andalana io, dia angamba afaka mamaly anao aho, satria tsy haiko, toa fandrahonana ho ahy ilay izy ... Ankehitriny tsy azonao kianina ve ianao sa ahoana?
[… Eny namana, manomboka ny ady: DIIIIINGGG…]
fialonana? ... haha ​​tsy izany mihitsy. Tsara noho izany aho.
Ary tsy mpanohitra SolusOS aho araka ny voalazanao, tsy mamaky izay napetrako tao amin'ny lahatsoratra ve ianao? 😀
fanaintainana? … Malahelo, tsy misy !!. Mianiana aho fa mirary soa indrindra ho an'i SolusOS, tena ataoko, ny nahasosotra ahy dia ny tsy fahazoana ny tanjon'ity lahatsoratra ity, ary mandeha hatrany ny fitsikerana 'ny antony nanaovanao azy'izaho'kely ny objectivity ananany'.
Momba ny andiam-panontanianao izay dia io indrindra no nolazaiko taminao tetsy ambony… Tsy guru aho, raha manao lesoka ara-teknika aho dia hanaiky fanakianana am-pifaliana.
«Tsy afaka miresaka momba akondro ianao raha voatavo no hohaninao. »O_o
Miady hevitra momba ny distro ve ianao? hahaha ho an'ny freak-distro ratsy tarehy sy tsy misy tsiro, karazana Vista mora vidy.
Inona no azon'ny mpampiasa vaovao eritreretina raha mipetraka manoloana ny masinina SoluOS izy ireo? "Ity Linux ity dia toy ny Windows, saingy ratsy kokoa."
TANDREMO, ny zavatra iray dia ny manisy hoditra na manamboatra azy ho KDE ka toa Windows 7 ary ny iray hafa dia ny fanesorana OS amin'ny alàlan'ny fananganana sary ny sariny, mba hahafahan'ny Microsoft manenjika mora foana an'i SoluOS noho ny fitoviana sy ny fitovizan'ny sary.
Haha, ka afaka nanao toy izany koa i KDE ho an'ny Windows Vista sy Windows 7, sa tsy izany?
Izay no antony itiavako an'ity bilaogy ity, manery anao hianatra izy 😀 nataonao izay hahalalako izay nivoaka voalohany ary ny Vista nivoaka voalohany noho ny KDE4. Na izany na tsy izany, ny KDE4 dia tsy mitovy amin'ny Vista fa kosa, SoluOS dia mitovy amin'ny Vista raha tsy misy ny effets vera ¬¬ ary efa hita ny fitoriana ny fangalarana sary.
Fa ny KDE3 miaraka amin'ny mangarahara sy ny vokatra hafa dia nivoaka voalohany noho ny Vista sy ny tetikasa LongHorn (izay nantsoina hoe Vista taty aoriana). 🙂
Ny mangarahara dia tsy tranga iray azo enjehina, farafaharatsiny mba hitovizan'ny sary, ary ny Windows dia toy ny fitaratra manjavozavo.
Miombon-kevitra amin'ireo zavatra lazainao aho fa ny fizarazarana dia mahatonga ny Linux ho lehibe nefa io koa no teboka malemy.
Raha tsy mifanaraka aho dia tsy mitovy ny tetikasa, LMDE = Debian Testing (amin'ny teôria) sy SolusOS = Debian Stable, fahasamihafana misy ifandraisany tokoa, etsy andaniny ny LMDE dia saika fizarana maty, tsy toa an'i SolusOS, mila manao izany ianao Ny jamba tsy mahita hoe aiza ny olana, amiko dia tsy zava-poana izany satria raha navelan'i Clem Ikey hanao zavatra androany dia ho zavatra hafa ny LMDE ... aza mahita matoatoa namana, jereo ny zavatra misy azy ireo.
Ny LMDE dia mifototra amin'ny fitsapana eny, fa ny fisian'ny fanavaozana, kinova fonosana sns ... dia teo akaikin'ny Stable.
Ary tsy mahita matoatoa aho, fa izay hitako ihany dia tsy mitovy amin'ny hitan'ny mpampiasa 🙂
Efa imbetsaka aho no nilaza azy ... tao amin'ny lahatsoratra, ary tamin'ny fanehoankevitra ... Tsy manohitra an'i SolusOS lavitra an'io aho ...
Ny valinteniko dia ho an'i @tavo hahahaha tsy ho anao, raha ny marina dia miombon-kevitra amin'ny zavatra sasany atsanganao aho ary milaza aminao bebe kokoa, efa naka ny fasan'i Debian aho, ka mieritreritra aho fa tsy misy hanafaka ahy any lol.
Ah, tsy misy hevitra hahaha, azafady, mamaly mivantana aho avy amin'ny fanovana-hevitra.php hahahahaha 😀
"... raha navelan'i Clem Ikey hanao zavatra androany, dia ho zavatra hafa ny LMDE ..."; Ary eto, namana Burjans, no ahitantsika fa tsy miovaova hevitra toa ahy koa i Ikey, ny LinuxMint dia tokony hiorina amin'ny Debian fa tsy Ubuntu, ary noho izany manana ny toetrany manokana, amin'izay lazaiko foana: «fizarana mifototra amin'ny fizarana fa mifototra amin'ny fanaparitahana hafa izany ", zavatra izay tsy atokisako mihitsy, ka izany no aleoko mampiasa Fedora fa tsy Fuduntu, ohatra. Izany no itehirizako ny SolusOS-nao, tsy hoe satria ampiasaiko (satria tsy) fa noho ny fitarihany.
"... raha navelan'i Clem Ikey hanao zavatra androany, dia ho zavatra hafa ny LMDE ..."
IZAO, homeko anao ny mofomamy sy «internez maimaimpoana» tena devianArt momba izany, fa tsy misy emotikona eto; 3; Fa azo antoka fa tena mifanaraka aminao izany.
Eny marina, tsy mbola nahita an'io aho tamin'io fomba fijery io. Hadinoko fa manana fanohanana maritrano maro hafa i Debian, sabatra roa lela io.
Oh, ary voalaza ... nandao an'i LMDE i Ikey noho ny antony manokana, toa tsy olomasina i Clem satria mino ny maro, na olona be tanana, na samy izy ... tsy misy hevitra, tsy zavatra mahaliana ahy io ( Tsy tiako ny olako manokana).
Tsy mieritreritra aho fa nisaraka tamin'ny fitiavan-tena izy, na dia manamafy na inona na inona amin'ny lafiny iray na hafa dia ho vinavina satria tsy nisy taminay niaraka taminy hahalala ny zava-nitranga tao anaty vilany. Mety misy antony 20 XNUMX handao ny tetikasa iray ary handeha hanao zavatra hafa samirery. Hitako fa "manana fandraisana andraikitra sy pataloha amin'ny toerany" Zavatra maro no mitranga amin'ny ekipa miasa indraindray izay manery ny 'ONE' hiala amin'ny sambo.
Ary indraindray avy amin'ny tsy rariny tanterahina amin'ny iray, ny tsy fankatoavana ny asa vita sns ... sns ... dia tsy ho izy irery no niasa nanome ny tsara indrindra avy aminy ary nanokatra ny masony hijery ny fomba ahazoan'ny hafa fanekena ary tsy raharahina izy satria ny safidin'ny "boss" manokana [iray, indraindray miaraka amin'ny iray hafa izay tsy tena miasa nefa mandray ny trosa ...) noho ny antony 20 hafa…. izao no fiainana…. Nilaozako ny sambo tamin'ny fiainako ary avy taiza no nialako dia namela elanelan'ny asa tsara indrindra izay niantsoan'izy ireo ahy hiverina intsony fa hoy aho hoe NOP izay nilaozako dia avelako mandrakizay !!
Izay no toetrako ... minoa ahy, ireo namoy ahy mbola mitady olona toa ahy ... hanao asa tena tsara ... ary mbola tsy azon'izy ireo ihany, afaka 3 taona mahery !!! hehehehe maso !!
Mamaly ny matrix
KZKG, tsy hitako ny antony tokony hanananao olana amin'ny fampiasana na tsy fampiasana SolusOS noho ny tombony na fatiantoka mampitaha an'i Debian. Nampiasa an'i Debian aho, toa ny LMDE, ankehitriny SolusOS sy Crunchbang no ampiasaiko (distro hafa miorina amin'ny Debian). Raha ny marina dia tsy hitako hoe maninona ny olona rehetra no mila manontany zavatra toy izao: SolusOS eny, na SolusOS tsia. Tsotra ny fanontaniana: rehefa mampiasa distro ianao ary anao izany distro izany dia fantatrao fa mandeha na tsia, tianao na tsy tianao. Na inona na inona distro io, ny fanontaniana dia hoe tianao na tsia, raha mahatsapa tsara ianao na tsia, na mifanaraka amin'ny zavatra ilainao izany na tsia. Ary tsy hoe satria miresaka distro ny rehetra ary milaza fa mahafinaritra dia tokony hieritreritra ny hampiasa azy ny olon-drehetra. Mampiasa SolusO aho satria mahatsapa fa ao an-trano ao aho, fotoana. Na ho an'ny Gnome kilasika, noho ny fahombiazany tsara, noho ny hatsarany, na inona na inona, mahatsapa tena tsara momba azy aho, vanim-potoana.
Ny teboka iray manohana (ary ny tena manosika ahy hanandrana azy kely kely) dia ny fitahirizan'ireo tahiry Debian iray ihany, noho izany tsy mila maka repos amin'ny distro hafa aho 😀
Miombon-kevitra aminao, tiako ny hizara ny fankasitrahako manokana ny antony tsy nanandramako an'ity distro ity, ny antony tsy nampiasako azy (na dia saika tsy azo jerena aza ireo lafy ratsy eo aminy). Saingy ... hitako fa nandratra fihetseham-po be loatra teto aho (tsy midika izany fa tsy ianao velively, tena tsia) ...
Tsia, mazava ho azy fa tsy nandratra ny fihetseham-poko ianao. Raha ny tena izy dia heveriko fa sarobidy ny i Desdelinux mivoaka miaraka amin'ny fomba fijery mitsikera an'i Solus. Ny zavatra mahaliana dia ity distro ity, farafaharatsiny ao amin'ity bilaogy ity, dia mety hiteraka resabe.
Izay distro rehetra hahazoana mpanara-dia haingana dia hiteraka resabe hatrany 🙂
Misaotra anao tamin'ny hevitrao, tena ataoko izany.
Fantatro fa tsy manana ambaratonga fiarovana mitovy amin'ny an'i Debian i SolusOS, fa raha avy any Ubuntu ianao, toa ahy, dia dingana mandroso izany. Ny Ubuntu dia manaraka ny politikam-pananganana ny kinova amin'ny daty iray ary mba hiposahan'ny masoandro any Antequera, kamo ny mpamorona azy satria tratran'ny bibikely.
Ka maninona raha mampiasa Debian mivantana? Satria heveriko fa SolusOS dia natao ho an'ny olona vao manomboka toa ahy, izay hanapaka ny tandrony handao ny rafitra araka ny itiavanao azy, hametraka ary hametraka indray. Vonona ny hampiasa SolusOS.
Mazava fa raha geek ianao dia tsy manana antony tsy hampiasana mivantana an'i Debian.
Ubuntu dia tsy mitombina izany, satria miasa mivantana miaraka amin'ny Debian tsy miovaova izy ireo ary tsy manaparitaka fonosana raha tsy andro vitsivitsy alohan'ny hamoahana ny kinova manaraka.
Azoko tsara fa marina ny anao, saingy mbola mankasitraka ny fe-potoana fandrosoana lava kokoa aho, ohatra, ny manao izay lazainao: manaova fonosana ho lava kokoa ary manamboatra bug.
Heveriko fa ny fizarana milaza azy ho "olombelona" ary tototry ny lesoka vantany vao mivoaka dia tsy mifanaraka amin'ny tenany.
Ny zavatra 'geek' dia sangisangy, na fomba fitenenana hoe, tsy mpampianatra aho, mainka fa haha.
Eny, SolusOS dia ho an'ny karazana mpampiasa te-hametraka distro, ary hamboariny ny zava-drehetra (na saika ny zava-drehetra), tsy mila mametraka fonosana hananana tontolon'ny birao sns sns.
Satria tsy izaho no karazana mpampiasa (tsy mampaninona ahy ny mametraka Arch na Debian ary manao ny zava-drehetra amin'ny tanana), te-hizara ny fomba fijeriko fotsiny aho, saingy maro no tsy mahatakatra ny tanjon'ity lahatsoratra ity (tsy manome ahy ny tsy midika izany ianao haha) 🙁
Tongava namana, ny tanjon'ity lahatsoratra ity dia mazava kokoa ... Mazava ho azy fa tsy hahatratra ny tanjonao ianao 😛
Manana hery telepathika ve ianao? ... mba hahafahanao milaza amiko ny fomba nahazoanao azy ireo 😀
Etsy an-danin'izany, tsy novalianao ny fanontaniana napetrako taminao momba ilay distro mpomba an'i KDE 😉
Ni Debian ni andohalambo pro-KDE izy ireo fa inona ny hevitrao? Tsy azoko. Mbola mpampiasa ianao KDE… Tsy haiko, fa heveriko fa efa tsy misy dikany intsony ity resaka ity… 😛
Ny tiako holazaina dia manonona zavatra betsaka ianao fa avelako na hampiasa distros pro-KDE aho, noho izany tsy hitako hoe aiza no ahazoako izay ampiasaiko na tokony hampiasako pro-KDE 😀
Afaho ireo antony ireo ary aza asiana azy ireo manokana, xd
Niezaka ny nametraka mivantana ny Debian Squeeze aho, saingy ny ATI ampidiriko kosa tsy avelako hisintona akory. Nividy Nvida izay notehiriziko aho rehefa hivoaka ny SolusOS 2. Iza no mahalala raha dingana eo anelanelan'ny Debian ity OS ity. Angamba tsy ho ela dia ho lasa Debianita aho. Arch dia mbola lehibe loatra ho ahy.
Eny, miteny amin'ny maha-zazavao aho anio sy mandrakizay, na dia tadidiko tsara aza dia efa ho 1 taona no nampiasa Linux. Araka ny eritreritro fa nolazain'i Luis dia mampiasa distro iray ianao na antony hafa na antony maro, satria mahazo aina ianao amin'izany na inona na inona. Nitranga tamiko fa tiako ny Mint, saingy tsy tiako ny nametrahana azy rehetra, te handeha lavitra aho ary hianatra ho an'ny tenako ary tiako i Arch, izay raha tsy diso ny fampahalalana ahy dia distro mahaleo tena na dia aingam-panahy avy amin'i Crux aza. Ankehitriny, amin'ny solosaina findaiko andrana dia mampiasa SolusOS aho. Tsy azoko lazaina ny antony. Mahatsiaro ho mahazo aina aho, tiako ny fisehony. Marina fa mbola afaka mampiasa an'i Debian aho ary manome mikasika an'i SolusOS ary mametraka izay tadiaviko ihany koa. Ary azo antoka fa hanao izany aho indray andro any satria aorian'ny Arch, tiako i Debian noho ny antony maro (anisan'ireny no tiako ilay mampiasa ny solonanarana ny mpilalao amin'ny sarimihetsika "Toy Story" hahaha). Tsy miditra amin'ny adihevitra aho raha mihemotra ny fampiasana Gnome 3 natsangana tao amin'ny SolusOS araka ny eritreritro fa voalaza tao amin'ny fanehoan-kevitra tamin'ny lahatsoratra iray hafa. Heveriko fa manaraka ny toetrako sy tsy manaja aho ary raha tsy maintsy mampiasa ny Gnome 3 dia ampiasaiko tsy misy olana na dia nifarana tamin'ny fitiavako an'i KDE aza aho fa rehefa teo amin'ny dingana fanandramana aho dia manandrana tontolo samihafa. Tsy haiko na hampitoviana izany amin'ny fandrahoana. Tsy miteny an-dakozia misy endrika hafahafa aho fa tsy misy akoho sy ovy tsara hilazana zavatra ... Reraka aho indraindray manamboatra azy io ary mitady zavatra efa vita (toy ny mampiasa SolusOS izao ) mandra-panandramako indray, na dia izany aza dia miafara amin'ny fihodinana ratsy tsy azo sakanana aho. Inona no hataoko? Tena manam-paharetana aho amin'ny ankapobeny nefa mety tsy dia be loatra. Somary mikorontana aho raha ny fahitako azy. Ny tiana ambara dia ny mahatonga an'i SolusOS hahatsapa ho mahazo aina ary tiako izany. Rahampitso iza no mahalala, angamba manoratra ara-dalàna aho ary miverina amin'ny Debian tany am-boalohany na miverina any amin'ny Arch malalako. Na mahazo fizarana mihoatra ny iray aho ary manandrana azy rehetra. Heveriko fa tsy nitovy tamin'ny nahatonga ny hevitra teo aloha fa io ihany no avelako ny hevitro manetriketrika indrindra sy miavaka indrindra. Isika tsirairay dia tia izay tiantsika ary dia izay. Indraindray aho any amin'ny toerana afovoany izay tsy fantatro raha mitady fitoniana aho fa tsy manana ny farany na ny mifamadika amin'izany. Raha ny tena izy dia zavatra tena mpanelanelana omen'i SolusOS ahy, saingy mbola diso ihany aho. Miarahaba: D.
Ireto ny raharahako:
Miaraka amin'ny PC roa aho izao, ny solosaina findainy, ary ny Desktop. Izaho irery no mampiasa ilay solosaina finday, ary avy amin'izany no anaovako ny raharahako iraisana (Oniversite, Asa, fialam-boly ...).
Ny Desktop dia ampiasain'ny fianakaviako, ary izaho indraindray.
Ao amin'ny solosaina findainy dia manana ny fitsapana an'i Debian (saika Pure) aho, manavao isan'andro aho miaraka amin'ny fanavaozana azo antoka, ary misy fatiantoka vitsivitsy ananako (lazaina, heveriko fa noho ny antony dia intel xD)
Rehefa nanapa-kevitra ny hanala ny Ubuntu 10.04 tamin'ny birao aho dia nosedraiko ary koa ny solosaina finday ... ary safidy ratsy io, tapaka ny rafitra nandritra ny fotoana rehetra, nahatsiravina ny sary nvidia (tsy fantatro mihitsy ny antony), ary niantso ahy matetika ny rahalahiko mba hilaza amiko fa tapaka ny rafitra <_
Rehefa nahalala momba ny SolusOS aho dia nosedraiko tamin'ny milina virtoaly, hitako fa nanana ny kely indrindra nilaiko tamin'io PC io izy, ary tamin'io andro io ihany dia nivoaka ilay kinova 64bit, tamin'io andro io no nametrahako azy, ary nanomboka teo, izahay tsy nanana olana.
Mampiasa ny PC ny fianakaviako nefa tsy mamono ny lohan'izy ireo fa ho simba ny zava-drehetra ary tsy misy tahotra ny fametrahana vaovao farany, ary tsy nanelingelina ahy intsony xDDD
Heveriko fa ny hatsaran'ny fananana distro hisafidianana dia ny hisy hatrany izay mahafeno ny filan'ny toe-javatra tsirairay sy ny masinina tsirairay.
Ny traikefa rehetra dia mitondra anjara biriky, ho takalon'ny fotoana sy / na angamba ezaka kely 😀
Ankasitrahako ny zava-misy fa manandrana karazana distro sy tontolo samihafa ianao, tena ataoko izany 😉
Korontana izaitsizy miaraka amin'ireo teny nalaina sy valiny ... Tsy fantatro hoe iza no mamaly an'iza na iza miresaka xDD fotsiny
iza no miteny irery
BUAJAJAJAJA MORI AMIN'IO VALINY GAARA XD
Mahita fahatapahana fifandraisana misy eo amin'ny KZKG ^ Gaara sy Elav aho, amin'ity lahatsoratra ity, manohina ny fihetseham-pon'ny olona sasany (manadala fotsiny).
Ny teboka malemy amin'ity distro ity dia olona tokana no miandraikitra ny fampandrosoana sy fikojakojana azy, raha sendra sery i Ikey dia avela ilay tetikasa.
HAHAHAHA tsia tsia mihitsy 😀
TPT!! ny zavatra mangatsiaka dia LEHIBE !!! HAHAHAHA tsy nihomehy be aho taloha hahaha
Heck ... MARINA IZANY !! xDD!
Mampatahotra ahy fotsiny ny zavatra mangatsiaka IkeY raha mieritreritra momba azy aho, antenaina fa tsy misy mangatsiaka amin'ny Solus, ha ha.
Hahahahahahahahahaha…. tsara izany hatsiaka izany.
Betsaka ny distro izay miankina amin'ny Dictator tsara ho an'ny fiainana. Nikatona vetivety ny slackware noho ny aretin'ny havokavok'i Patrick Volkerding
Ny tena marina dia izay nolazaiko andro lasa izay, ny maha distro manokana anao manokana dia tsy misy antoka azo aharitra mandritra ny fotoana maharitra.
Ho ahy dia mahamenatra ny olona manana talenta an'Andriamaty Ikey no "terena" na inona na inona antony mandeha irery fa tsy hanao izany amin'ny distro mitambatra sy ekipa tsara.
Hehe Ho an'ny firaketana, tsy mampaninona ahy ny manaiky fa indraindray aho miteny mba hanazavana ny tenako fotsiny. Raha ny tokony ho izy dia tsy naneho hevitra aho fa mampiasa Solus 2. Ny hany zavatra ao anaty 32 bits ary ny laptop-ko 64. Hamoaka kinova ve izy ireo mandritra ny 64 fotoana fohy sa hiandry ny famoahana ilay kinova miorina?. Mieritreritra aho fa tsy hilamina i Wheezy raha tsy amin'ny 2013 raha tsy diso aho.
Soooo be ve ny hoe milamina ve Wheezy? Hahaha tsy mino aho 😀
Ny novakiako ankoatran'ny adihevitra ofisialy hackney "Ho vonona i Debian rehefa vonona izany" dia ny hiezahan'izy ireo hanaja ny lamina amin'ny fotoana farany ary hamoaka izany amin'ny febroary 2013.
Ah, mahita ny tenako avy eo mankany Sid aho, satria tsy mikasa ny handany mihoatra ny herintaona miaraka amin'ireo fonosana ireo ihany hahaha
Elav, mijaly amin'ny versionitis maranitra ianao fa milamina izay manasitrana fahanterana (saika matetika), lazaiko anao avy amin'ny zavatra niainanao
Te-hanome hevitra marobe aho saingy hametra ny teniko hilaza izao manaraka izao:
1. Heveriko fa tsy manana fahefana ara-moraly be loatra aho haneho hevitra momba ilay distro vaovao mahafinaritra izay vao nivoaka vao haingana; Eny, tsy mbola nampidina azy akory aho.
2. Hitako fa tamin'ity bilaogy ity dia nidera ny distro vaovao tamin'ny fomba somary mihoapampana izy ireo.
3. Milaza aho fa mihoa-pefy satria mieritreritra aho fa tsy mandray anjara betsaka noho ny an'ny distro hafa azo avy amin'ny fanaparitahana manerantany.
4. Ilay zavatra momba ny fampiasana ny toeram-pivarotan'i Debian, araka ny lazainay eto fa tsy maintsy "raisinao amin'ny siran-tsiranoka", satria ny distro nalaina indraindray dia manisy fanovana izay "misy akony" fanavaozana; Nolazaiko tamin'ny zavatra niainako manokana izany, hatramin'ny fotoana lasa izay dia nampiasa aptosid aho hametrahana debian GNU / Linux ary nanana olana kely dia kely tamin'ny fanavaozana aho, indrindra noho ny fanamboarana nataon'ny ekipan'ny distro.
PS: Tsy nampidina ny distro aho satria tapitra ny fotoana hanandramako hoe firy ny distro. Ny fizarana iraisan'izao tontolo izao ihany no ampiasako, ary zavatra hafahafa no tsy maintsy hitranga mba hijanonako amin'ny fampiasana azy.
amin'ny farany dia misy ny fahatsapana fa ny mpanoratra ny fidirana dia voafetra ihany amin'ny filazany fa izay ataon'ny solusos dia ataon'i debian koa ary angamba tsara kokoa. mety marina izany. fa tsy hitako izay maneho ny "teboka ratsy" an'ny solo-tena
Ary raha mampihatra izany mason-tsivana izany (izay tsy nolazaiko fa marina), ho an'ireo ubuntu sy ireo distros am-polony maro mifototra amin'ny debian?
Ny ataon'i SolusOS dia ny fitsitsiana fotoana, ezaka, tsy manao an'io i Debian.
Ho an'ny filako, izay tadiaviko na tadiaviko amin'ny distro, ny SolusOS dia tsy manampy na inona na inona amiko manokana, manondro ireo zavatra ilaiko manokana.
Tsy milaza aho hoe tokony hitsahatra tsy hisy ny SolusOS, mifanohitra amin'izay ... araka ny efa nolazaiko efa imbetsaka.
KZKG ^ Gaara, mihoatra ny lahatsoratra tsara dia tsara, hoy aho hoe lahatsoratra BRAVE, na amin'ny teny hafa hoe "Tafiditra amin'ny fiangonana isika"
Amin'ny farany, ny fotoana no hanaporofoana raha maharitra ny distro na tsia. Heveriko manokana fa tsia. Ary na izany na tsy izany, tsara kokoa ny mitandrina alohan'ny hideranao ny distro saika vaovao toy ny adala. Toy ny vitsika kely nahita voam-siramamy ary nilaza fa tendrombohitra io.
Hifoha maraina ary ho hitantsika ...
Oh, ary tsy mangatsiaka ny fahamasinany Ikey, raha ny fanehoan-kevitr'izy ireo teo.
Giskard, tsara be raha kiana i Solus ao amin'ny forum iray izay nidera azy fatratra. Raha ny momba ny fiangonana dia hahita azy foana ianao isaky ny mitsikera distro Linux ianao, na inona izany na inona. Raha mitsikera an'i Debian ianao, dia mitsambikina ny Debianita, raha mitsikera ny Ubuntu ianao, dia mitsambikina ny ubunteros, raha mitsikera an'i Fedora ianao, ny Fedorianina ... sns. Amin'ny distro tsirairay. Ny Solus dia tsy noforonin'i Solus, ny mitranga dia sekta ny Linuxers, ataontsika kôlôma ny distro.
Raha ny fanazavana, momba ny Fahamasinany Ikey, mivavaka isan'andro aho mba tsy ho voan'ny sery izy, ha ha.
Raha ny fanazavana, mandeha ny tsaho milaza fa handeha hiala an'i SolusOS i Ikey satria hiady aminy izy
izany no tena fihenan'ny solus, izay miankina betsaka amin'ny olona tokana.
Raha ny tena izy dia tsy manao izany Ikey solus i Solus, miteny fotsiny aho fa bandy dimy izy ireo, araka ny ahitanao raha mankany amin'ny pejy SolusOS ianao ary tsindrio ny About, ary avy eo mifankahita amin'ny ekipa. Ny teboka dia ny kalitaon'ny OS dia tsy miankina, araka ny fantatry ny maro, fa ny orinasa lehibe sy olona maro no manohana azy. Ary momba an'io dia misy ohatra na anatiny na ivelan'ny Linux.
Tsy ny hevitra no 🙂
Tsy nanandrana namorona lelafo mihitsy aho, mainka fa ny fifanakalozana mason-tsivana na zavatra mitovy amin'izany ...
Tsotra fotsiny, ny nanosika ahy hanoratra ity dia ity eritreritra manaraka ity:
«samy mampiasa SolusOS ny tsirairay, tiako ny milaza ny antony tsy ampiasako azy io, hahitana raha betsaka ny mpampiasa mieritreritra toa ahy.»
Tsotra toy izany, inona no diso fandikana na zavatra hafa.
TSY mampiasa faran'ny fifanakalozan-kevitra KDE.
Antony lehibe nefa tsy lehibe 🙂
Oad! Taraiky toy ny mahazatra aho tamin'ny dinika… (Leo «Avy» rehefa tonga alina tamin'ny gmt -3). Milamina ny zava-drehetra amin'ny paositra, saingy ... ekeko fa safidy tsara ny fampiasana "mother distro" alohan'ny hitsapana ny metadister na ny derivatives, fa ny tena fahasoavana avy amin'ny derivatives dia miaraka amina fototra iray ihany no manome vahaolana samihafa avy amin'ny distro reny. Ohatra, ao amin'ny SolusOS dia azonao atao ny mahita ny faharetan'ny debian base amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny fitaovan'ny rafitra, nefa miaraka amin'ireo programa birao farany ampiasaintsika isan'andro. Ary ho antsika tsy te hiala amin'ny 3d sy ny lalao dia mitondra playonlinux sy vahaolana hametrahana mpamily AMD sy Nvidia izy io. Mazava fa tsy metradistro maimaim-poana 100% izy io, ary tsy maintsy hazavaina fa raha mampiasa Debian isika amin'ny ankapobeny dia mampiasa mpamily fananana miaraka amin'ny tahiry tsy misy maimaimpoana. Eny, ny teboka tiako ny metadisters: mampiasa Salix OS aho satria Slackware natao ho an'ny mpampiasa marobe izy io, ary manana ny ankamaroan'ny zavatra ampiasain'ny olona iray izy io, nefa tsy biby goavambe toy ny Ubuntu mampalahelo. Heveriko fa tsy maintsy hitranga amin'ireo izay mampiasa SolusOS mitovy amiko: manana "zavatra" izay tsy hitany ao amin'ny distro reny.
Ny zavatra ratsy hitako fotsiny dia zaraina amin'ny DVD, tiako ny CD metadistros, manana izany zavatra ilaina izany, ary avy eo ampiako zavatra ao aminy amin'ny repository. Ny zavatra iray hafa dia ny fiarovako ireo fandraisana andraikitra toa ny birao MATE, saingy misy ifandraisany amin'ny safidiko amin'ny forks rehefa vita tsara izany.
Andao hankalaza ny fangaro, fangaro, fampifangaroana, syntetika. Satria ho an'ny fitaovana sy rindrambaiko maimaimpoana 100% dia mbola be ny sisa ... Ary tsy misy distro tonga lafatra, andao hitady ilay mahatonga antsika hiaina traikefa tsara kokoa, tsy misy hafa.
Ary manontany anao aho: tsy mieritreritra ve ianao fa ny «maro an'isa» be loatra dia misy fiatraikany ratsy amin'ny famoahana gnu / linux amin'ny birao?
Ny tiako holazaina dia ... raha toa ka nampiasaina tamin'ny tetikasa iraisana na tamina tetikasa maro samy hafa ny angovo naparitaka ... tsy fantatro, heveriko fa hahasarika mpamorona sy orinasa maro izany, farafaharatsiny, maninona no izy ireo? matahotra ny karazany maro be
Ny zavatra momba an'i Tavo dia ny fisian'ny distro maro toy ny olona sy eritreritra eto an-tany. Linux dia fahamaroan'ny ezaka, ao amin'ireo vondrom-piarahamonina SL izay tena ianaranao sy ampianarinao miaraka amin'izay dia tsy misy ifandraisany amin'ny tetikasa fotsiny izany. Ny tetikasa firaisankina mahomby dia ireo izay nahitana fitoniana rehefa mandeha ny fotoana, ary fanampiana mavitrika avy amin'ny fiarahamonina. Fa ny ankamaroan'ny zavatra ankafizintsika ankehitriny dia tratra tamin'ny forks sy ny asa derivative, izay avy eo mahatratra fahamarinan-toerana, na mihandrona. Ohatra ohatra ny Xorg, Libreoffice, fitaovana dvd + -r, floxbox, birao MATE, dia tranga vitsivitsy monja amin'ireo forks izay nahomby. Mikasika ireo disto dia tsy mifidy azy ireo ny olona iray satria malaza fotsiny izy ireo, ary ny fahitana ny "habetsaky ny mpamorona sy ny orinasa manohana azy, dia voafitaky ny tolo-kevitra sy ny filozofia ao ambadiky ny distros sy ny derivatives-ny. Ohatra, i Debian dia mitaona ahy amin'ny fifanarahana ara-tsosialy, sy ny fahatsapany ny fiarahamonina, mihoatra ny ara-barotra. Tiako ny fahatsoran'ny slackware sy ny forongony, na dia atody atody hitady vondron'olona mavitrika amin'ny Internet aza aho. Mikasika ny Linux amin'ny maha birao anao, ho ahy dia mihatsara hatrany izy, ary inona no olana na base na meta ampiasainao raha GNU / Linux ihany. Tsy te handresy an'i Windows aho, mampiasa Linux satria azo ampiharina, azo antoka, tsy lafo, mahatonga ahy ho afaka, ary ambonin'izany rehetra izany dia mianatra bebe kokoa aho ...
Raha te hanampy ny lelafo dia heveriko fa tsy mitovy ihany koa ny andalana faha-1 sy ny gnome faha-2 amiko.
Raha mpampiasa KDE ianao dia azoko tsara fa milaza ianao fa tsy mandray anjara na inona na inona; manana safidy maro ianao.
Ny distro tsirairay dia misy ny mpihaino azy. SolusOS dia manome ahy debian base miaraka amina programa vaovao nohavaozina; fampiononana ary miaraka amin'ny gnome 2.
Manoratra amin'ny debian xfce aho ary mahomby izany, saingy tiako i SolusOS; Ao anaty lalina izy ireo dia distro samy hafa, miankina amin'ny zavatra tianao homena anao izy ireo, ho ahy roa no tsara indrindra,
resaka tsiro io.
Tsy dia miresaka loatra ilay teboka hoe mpampiasa KDE aho, fa kosa ny valiny ho distro amin'ny ankapobeny.
miankina amin'ny tianao ny hitondran'izy ireo anao
resaka tsiro io
Tsy haiko hoe maninona no olona maro no nanafika ahy tsy nisy antony ¬_¬
Ny mpampiasa Debian dia saika tsy hanova ny distro satria mpampiasa efa za-draharaha, SolusOS dia "Debian mora" ary hafa ny fomba fanaony. Ny fampiasana "Gnome 2" indraindray dia tsy natao ho tsy nostalgika fa kosa ho an'ny famokarana sy ny fahombiazan'ny loharano.
Fivoriana tena tsara.
Tsy fantatro raha hampiasa an'ity distro ity aho, saingy ny antony tsy hampiasako azy dia mitovy amin'ny antony tsy ampiasako ny LinuxMint. Tsy tiako ny paty.
Raha ity Debro ity dia tsy Debian hafa fotsiny, ary nampiasa gnome mitovy izay nolazainy fa ho azony, hanome / hanokana lahatsoratra mitovy ve izy ireo?
Mazava ho azy eny ..
Heveriko fa mitovy aminao ihany. Ny habetsaky ny lahatsoratra natokana tao anatin'ny andro vitsivitsy tamin'ity distro ity dia saika nahatonga azy ireo ho toa nahazo vola. Ratsy ny fanatisme na avy aiza na avy aiza.
Hihaona aminao aho afaka herintaona na latsaka rehefa mijanona ity stro plus supert ultra wonder distro ity.
MANDEHA IZAO! Hadinonao ve ny hatsaran'ny firesahan'ireto tovolahy ireto momba ny LMDE sy ny PFFFT, lasa any amin'ny helo ve ilay distro taoriana kelin'izay? Ary farafaharatsiny mba farafaharatsiny, izaho, izay nilaza zava-mahatalanjona momba izany tao amin'ny deviantArt, dia tsy nanome denaria iray akory. Ary jereo izay nolazainao fa raisiko ho sangisangy io, raiso koa ny ahy. Ary efa ela ny LMDE ary samy mametra ny tenantsika mankany amin'ny RIP fotsiny isika rehetra. Toy izany koa no hitranga amin'i Solus raha tsy faly ny mpamorona.
Inona no olana raha miteny sy manao lahatsoratra betsaka araka izay itiavany zavatra ny bilaogy? Izany dia toy ny fangatahana magazine amin'ny lalao video hitsahatra tsy hiresaka lalao video sy hamono ny fitaovan'ny zaridaina. Tsy mandeha izy ireo raha misy ny zavatra ... tsia.
Tsy dia azoko tsara ... na tsara, "misokatra" tokoa ilay hevitra.
Solus OS dia natao ho an'ny mpampiasa mahazatra .. na mpampiasa farany araka ny lazain'ny sasany ..
Tsy ny mpampiasa rehetra no misafotofoto amin'ny fanovana rakitra am-polony am-polony (tsara toa an'io ho an'ny fampisehoana).
Ilaina ihany koa ny manome kofehy amin'ny fizarana an'io karazana io toy ny Ubuntu, Elementary ary vao haingana ny Fedora.
Tsy esoriko ny karazana paositra izay fomba fijery, na izany aza raha mety hampifangaro ny mpamaky izany, satria ny hevitra ny antony tsy hampiasanao ny distro dia tsy voalamina tsara.
Ankoatra ny proxy tafiditra, tsy misy an'io distro io fa tsy manana ny hafa izay efa nosedraina ampy ny olona maro. Noho izany, raha tsy mila an'ity proxy tafiditra ity ianao dia tsy ilaina ny manala ny distro anao izay efa nanodinkodina ny fombanao mba hanandrana vaovao iray izay Andriamanitra irery no mahalala ny faharetany hiainany, satria tsy namoaka ny kinova 2 izy ireo, izay mbola ao ALPHA !!!
Tany am-piandohana dia nanazava aho fa nampiasa Debian (amin'ny mpizara Stable, eo amin'ny birao fitiliana) nandritra ny taona maro. Saingy tsy afaka nampiasa ny Debian tamin'ny birao aho raha tsy natao ho an'ny repos tsy deba na deb-multimedia.org.
Ireo disto rehetra voalaza ao amin'ilay lahatsoratra, nalaina avy tamin'i Debian, dia mitady tanjona mitovy: The Desktop. Izany no nahaterahan'ny Ubuntu, izany no antony nivoahan'ny Mint, izany no nahatonga ny LMDE, izany no nahatonga an'i SolusOS sy ny maro hafa, maro ny distro satria tsy mora vahana ny olana. Ary isaky ny mivoaka ny iray amin'ireo distro ireo dia hisy ny tabataba satria izay mamely ny fantsika dia hahazo loka lehibe.
Tao anatin'izay volana vitsivitsy lasa izay, rehefa nametraka GNU / Linux amin'ny solosaina "end-mpampiasa" aho dia nampiasa LMDE, ary hitako fa tena tsara. Miaraka amin'ny DVD 1.2 Gb dia nahavonjy ahy fotoana betsaka izany raha oharina amin'izay nataoko teo aloha (apetraho ny Testing, ary ahamboaro ireo repo sns.). Raha miala ny LMDE, ho an'ireo tranga ireo dia hanomboka hampiasa SolusOS aho.
Fa miresaka momba ny birao, ny fanontaniana miseho ho ahy dia: Fa maninona no sarotra amin'ny Debian ny miseho (na amin'ny sisiny) aza ny fonosin'ireto tetikasa hafa ireto? Fa maninona no tsy ny fonosana avy amin'ny mate-desktop.org, (na ho an'ny tranga KDE ireo avy amin'ny trinitydesktop.org)? Fa maninona ny fonosana deb-multimedia amin'ny Debian ultra-sid ultra-nonfree? Fa maninona ireo fonosana Mint? Inona no olana amin'ny fananana fork an'ny Gnome2 miaraka amin'i Gnome3?
Mampiasa Debian aho, fa ny olona Debian kosa tsy manamora ny fanaovana desktop…. Ary hiseho hatrany ny distros hamenoana ity banga ...
Ny resaka multimedia multimedia dia momba ny olana ara-dalàna. Manazava izany eto izy ireo
marina ve ianao Maria ... Manaiky tanteraka aho
Manuel Perez Figueroa dia hoy izy:
Iray amin'ireo olana hitako amin'ny SoluOS, ny fampiasana LVM voahidy amin'ny partitions rehetra an'ny kapila mafy. Debian dia manao azy amin'ny fametrahana azy, ny Ubuntu no manao azy, ny SoluOS tsy manao, ny Linux Mint tsy manao izany. Izay no antony ampiasako ny 2 voalohany ...
Valiny tamin'i Manuel Perez Figueroa
Linux Mint no manao azy. Tsy haiko izay dikanteny ampiasainao, fa ny farany dia.
Ary farany, ny hevitra hoe misy distros maro dia ity, ny mpampiasa (olona) izay tsy tia iray dia afaka misafidy ny hampiasa iray hafa, satria io fahalalahana io ihany no ahafahantsika misafidy izay tiantsika na tompointsika indrindra.
Tsy miaro ny iray na ny hevitra hafa aho, ny fahalalahana misafidy.
Ohatra, manoratra avy amin'ny Fedora 17 aho, fa mampiasa Ubuntu 12.04 ihany koa
Ny tsara dia ho an'ny rehetra.
Indraindray KZKG ^ Gaara dia toa tsotra indrindra amiko rehefa mamoaka ity karazana lahatsoratra ity izy; ny fahafantarana fa toeram-pialofana madinidinika ao SolusOS ity bilaogy ity ary manantena izy ireo fa tsy hitsikera izany.
Na iza na iza mahalala mialoha fa hiteraka resabe ity kilasin'ny lahatsoratra ity, araka ny hita.
Raha ny tokony ho izy, tena mahasalama ity karazana adihevitra ity, satria mampiharihary ny mahatsara sy maharatsy an'i Solus.
Heveriko fa mijery ny mpiara-miasa amin'ny maso tsy mitovy isika ... Tsy mbola nitranga tamiko fa desdeLinux dia fitoerana masina ho an'i Solus (izany na nalefan'izy ireo tany amin'ny churro niaraka tamin'izay napetrako raha tsy nomeny Xfce na fahagagana aho. Hametraka azy aho satria tena niady tamin'i Gnome amin'ny ankapobeny aho) Saingy, hitako hatramin'ny ady hevitra hatramin'ny adihevitra teo amin'ireo lafiny ireo. Indraindray mahazo antsasaky ny troll aho, fa mba hahazo sangisangy amin'ny androny, saingy nisy fotoana roa izay aleoko mangina satria mahay mikitika ny hozatra aho ary tsy tsara izany.
Augenium FSF dia hoy izy:
Raha mandany ny fotoananao amin'ny adihevitra tsy misy dikany ianao dia fandaharana ao amin'ny Fedora 17 aho, ny zandriko vavy 8 taona no faly indrindra amin'ny XO (fihodinana Fedora), ny rahalahiko 15 taona milalao Alien Arena any Fedora (Spin KDE) haaa sy ny zokiko. rahavavy (Spin Designe) manitsy sary vitsivitsy miaraka amin'ny Gimp 2.8 nefa tsy miankina amin'ireo ppa tsy azo atokisana an'ny disto hafa. Fahamarinana madio, ny rindrambaiko farany, ny kernel farany. Tsy mitondra zavatra napetraka izany. Mazava ho azy! Mitondra azy ve i Debian? Ny Ubuntu ve dia mampiditra codec sns sns? Fedora dia fizarana iray izay mifanaraka amin'ny fitsipika 4 an'ny rindrambaiko maimaimpoana. Tsy midika akory izany fa tsy afaka mametrapetraka fananana tompon'antoka amin'ity rpmfusion ity ianao !!
Valiny amin'i Augenio FSF
Tokony hampiditra pejy tsipelina voalohany ianao: DISCUTIONS. Ity bilaogy ity dia mbola tsy mifanaraka amin'ny "par début tout crudely"
"Dinika ady heloka" ary tonga hiresaka momba an'i Fedora ianao ??? tapitra izao tontolo izao.
Ny fanandramana Debian dia ankehitriny kokoa noho ny Fedora ary milamina kokoa. Ubuntu dia mametraka ny codecs toy ny distro hafa ary amin'ny fomba mora kokoa noho ny Fedora.
Wow, tena naneho hevitra maro be ity. Voaroba ny tranon'akoho!
JK dia hoy izy:
Lahatsoratra mahatsikaiky izaitsizy, tsy dia nianarako firy.
Raha fintinina: ny maharatsy na ny lafiny ratsy amin'ny SolusOS fotsiny dia ny afisy Gaara tsy mampiasa io fizarana io satria mpampiasa mandroso izy !!
Ho an'ireo vao teraka toa ahy dia azoko lazaina fotsiny fa SolusOS dia distro LEHIBE, tsy tonga lafatra, fa asa tsara sy mahafinaritra nataon'izy ireo !!
Valiny amin'i JK
Tsia, na «mpampiasa mandroso» aho na tsia dia tsy misy ifandraisany betsaka amin'izany, izaho dia karazana mpampiasa tsotra izay aleony manatsara ny rafitra, izay te-hametraka ny fonosana tsirairay ary hamita ny ankamaroan'ny antsipirihany momba ny distro, mpampiasa toa ahy ... aleony mametraka irery ny fonosana tsirairay, ary tsy avelao ny rafitra ho tonga zavatra marobe napetraka ao anaty toerana misy anao.
Tsy misy fotoana ilazako hoe SolusOS dia distro ratsy, mahatsiravina izy na kely noho izany, milaza fotsiny aho ny hevitro manokana momba azy.
Lahatsoratra mampihomehy? … Tsy asian-teny.